लगानी बोर्डको सीईओमा सुशील भट्ट - Aarthiknews
काठमाडौं । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको भट्टलाई बोर्डको सीईओ नियुक्त गरेको हो । भट्ट चार वर्षे कार्यकालका लागि बोर्डको सिइओ नियुक्त भएका हुन् । यसअघि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका थिए ।
लगानी बोर्डको सीईओ सिफारिस गर्न गठित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वको समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो । तीन मध्ये एकलाई लगानी बोर्डको आगामी ४ वर्षे कार्यकालका सीईओ नियुक्ति गर्नेछ । भट्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिकका हुन् ।
बोर्डको सीईओ नियुक्तिका लागि गठित अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले मन्त्रिपरिषद् समक्ष तीन सुशील भट्ट, डा. सरोज कोइराला, र रामकृष्ण खतिवडा जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ वा परियोजना विश्लेषण, वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहितको उच्चस्तरको दक्षता भएको हुनुपर्ने छ । सीईओ बन्नको लागि ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेंछ ।
बोर्डको सीईओका लागि खुलाइएको आवेदनमा १२ जनाले दरखास्त दिएका थिए । सुशील भट्ट, सुशील ज्ञवाली, डा. सरोज कोइराला, रामकृष्ण खतिवडा, कृष्णप्रसाद आचार्य, दीपकराज जोशी, सुमन शर्मा, चण्डिका भट्ट, शेरजंग कार्की, रमेश चन्द्र पौडेल, लक्ष्मीविलास कोइराला र आशिष गजुरेलले सीईओका लागि दरखास्त दिएका हुन् ।